ट्वीटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरालाई किन गर्याे? प्रतिबन्धित – Sero Fero News
ट्वीटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरालाई किन गर्याे? प्रतिबन्धित
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - १७ साउन २०७७, शनिवार
माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरालाई १२ घण्टाका लागि प्रतिबन्धित गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको कथित औषधिका बारेमा गलत तथ्ययुक्त भिडियो पोष्ट गरेसँगै ट्वीटरले डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरको ट्वीटर अकाउन्टलाई १२ घण्टाका लागि निलम्बन गरिदिएको हो ।
ट्रम्प जुनियरले पोष्ट गरेको भिडियोले ट्वीटरको कोभिड–१९ सम्बन्धी गलत सूचना विषयक नियम उल्लंघन गरेको ट्वीटरले ठहर गर्दै निलम्बनको कारवाही गरेको हो ।
उनको ट्वीटर अकाउन्टबाट १२ घण्टासम्म कुनैपनि ट्वीट गर्न नपाउने गरी निलम्बन गरिएको हो । तर उनले ट्वीटरबाट डाइरेक्स मेसेज पठाउन तथा अरुका ट्वीटहरु हेर्न भने पाउँदछन् ।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा ट्वीटरले आफ्नो नीति मुताविक नै ट्रम्पका छोारमाथि उक्त कदम उठाएको जनाएको छ ।
यसअघि ट्वीटरले जातीय विद्वेष फैलाउने खालका सामाग्री रहेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ट्वीटमाथि पनि तथ्यजाँचको संकेत राखिदिएको थियो । जसका कारण ट्वीटर र ट्रम्पबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका बारेमा सोसल मिडियाबाट अफवाह तथा गलत तथ्यहरु नफैलिउन् भन्नका लागि ट्वीटरले कडा कदम चाल्ने गरेको छ ।
ट्वीटरको कदमप्रति जुनियर ट्रम्पका प्रवक्ताले कडा टिप्पणी गर्दै ट्वीटरको यस्तो निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने खालको व्यवहार रहेको बताएका छन् ।